Ukuphelela Kwebhrendi Kufile | Martech Zone
NgoMsombuluko, Juni 1, 2009 NgoLwesine, July 23, 2015 Douglas Karr
Emasontweni ambalwa edlule ngikhulume nezinkampani ezimbalwa ezizama ukusebenzisa amasu okunqoba imiphumela engemihle yezinjini zokucinga maqondana nezinkampani, imikhiqizo noma izinsizakalo zazo. It kwakuvame ukwenzeka ukugcina umkhiqizo ophelele eminyakeni edlule. Uma kwenzeka izinto ezimbi, ungakhokha ukuze ususe izinkinga noma uzishayele ngaphansi kombhoxo ukuze kungabikho muntu ozitholayo.
Lokhu akusasebenzi. Ukuvelela kwezingosi zokuxhumana nabantu, amasayithi wokubuyekeza amabhizinisi nokubhuloga kunikeze ikhasimende elicasukile inkemba enkulu yokushaya enhliziyweni yomkhiqizo wakho. Amakhasimende enza udlame (kwesinye isikhathi ngesizathu esizwakalayo) futhi umphathi womkhiqizo uzizwa engenalusizo.
Ukuphelela komkhiqizo kufile.
Akuseyona inketho yomphathi womkhiqizo noma i-CMO ukugcina ubuqotho bomkhiqizo. Manje kungumsebenzi we wonke umsebenzi enhlanganweni. Ungazami ukuqhumisa izinduku ezinkulu noma isisi esikhalisa unyembezi, noma. Ummeli oyedwa osebenza ngokweqile othumela i- yeka futhi uyeke ingasetha i- Umphumela we-Streisand ngokunyakaza.
Lezi zinkampani zingibuka zingenakuzisiza, zifuna ngiziqinisekise ukuthi ngiyakwazi silungise inkinga yabo. Akusebenzi kanjalo. Ngeke iphinde isebenze kanjalo. Ukuphelela komkhiqizo kufile. Ukuphathwa kwegama, ukwenza izinto obala, kanye nokwenziwa kwamakhasimende okuhle kuyizimpahla zokuvikela zomphathi womkhiqizo. Uma inkampani yakho ifuna ukwakha idumela elihle, kuqala ngalo inkonzo enhle yamakhasimende.
Uma ufuna ukubulala i- ezimbi indaba ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha, udinga ukusebenza kanzima kakhulu njengenkampani ukwenza okuthile okuhle izindaba zenza ikhasi lemiphumela esikhundleni salokho. Kuningi, kunzima kakhulu.
Ngokufanayo, usuku lokukhohlisa abathengi sengathi bangamaZombi angenangqondo seluphelile, futhi. Abathengi manje bafunda, balalele, baxoxe futhi bacwaninge ngezinqumo zabo zokuthenga. Izindaba ezimnandi ukuthi abathengi ungalindeli ukuphelela akusekho… kepha balindele ukwethembeka. Uma unekhasi lezilinganiso zomkhiqizo eligcwele izinkanyezi ezi-5, olunye ucwaningo lukhonjisiwe ukuthi abathengi ngeke bathole ukuthi izibuyekezo zithembekile. Ngamanye amagama, ungalahlekelwa amakhasimende uma umkhiqizo wakho ubonakala uphelele. Hewu.
Asikwazi ukulawula umlayezo ngaphandle kokuthi sikwazi ukwenza okulindelwe kulokho esifisa ukuthi umkhiqizo wethu ukuveze. Asisakwazi ukufihla amaphutha ethu, kufanele siphumele obala ngawo. Iminyaka yobudala ye- ukungapheleli komkhiqizo uphakathi kwethu - futhi ukuze siphumelele kumele sikhululeke futhi sithembeke ngemikhiqizo nezinsizakalo zethu… okuhle noma okubi. Lapho inkampani yakho ingaphili ngokuvumelana nokulindelwe (okuzokwenzeka), kufanele usabele ngokushesha ukulungisa inkinga. Ngingakugqugquzela ukuthi uphendule ngokunganaki kwi-turf yakho, noma kunjalo. Qondisa ithrafikhi lapho unemakrofoni khona kunokuvuza insiza engahle ingakufanele ukugqama.
Uma inkampani yakho inomphumela ongemuhle wenjini yokusesha, khuthaza amakhasimende angompetha bomkhiqizo wakho ukuthi akunyuse kumasayithi abo, amaphrofayli abo, amanethiwekhi abo kanye / noma amabhulogi abo. Awusakwazi ukulahla noma yini engalungile kwi-Intanethi, kepha ungakwazi khuthaza okuhle.
Lapho inkampani yakho iphila ngokulindela, uzothola kulula kakhulu ukuphatha umkhiqizo wakho ngempumelelo.
Tags: brandokulindelwe brandukungapheleli komkhiqizoukuphelela komkhiqizo
Ingabe Ukumaketha Kwe-Apple Kuyancipha?
UJun 1, 2009 ngo-2: 35 AM
Iposi elihle kangaka uDoug. Angikwazi ukuvumelana nawe ngaphezulu. Isimo somphathi womkhiqizo sishintshile ukuthi bayathanda noma cha. Bona (kanye nathi) bazophumelela futhi bahluleke ngokwazi kwabo ukuvuleka nokwethembeka ngemikhiqizo nezinsizakalo zabo? kuhle, kubi, noma akunandaba.